SIMAD oo u dabaal degtay sanad-guurada 21aad ee aas aaska Jaamacadda -
Home News SIMAD oo u dabaal degtay sanad-guurada 21aad ee aas aaska Jaamacadda
SIMAD oo u dabaal degtay sanad-guurada 21aad ee aas aaska Jaamacadda
Munaasabad si heer sare ah loosoo agaasimay laguna maamuusayey xuska 21 guuradii kasoo wareegtay aasaaska Jaamacadda SIMAD ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Munaasabada waxaa kasoo qeybgalay maamulka, macalliminta, ardayda iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay xafladda.
Jaaamacada SIMAD ayaa waxaa la aas-aasay 6-da Nofeembar 1999, waqtigaas oo ay adkeyd in ardayda dugsiyada sare ee dalka kasoo qalinjabiya ay helaan waxbarasho sare.
Ustad Yuusuf Macalin iyo Eng. Maxamed Maxamud Calasow oo ka tirsan Jaamacadda SIMAD ayaa ka sheekeeyay taariikhda Jaamacadda, iyagoo xusay in Maalinta Jaamacadda SIMAD loola jeedo in bulshad la xusuusiyo waxyaabihii u qabsoomay Jaamacadda sanadihii la soo dhaafay iyo qorsheyaasha ay hiigsaneyso inay gaarto mustaqbalka dhow.
“SIMAD waxaa la aas aasay 6 November 1999kii waxaana lagu aasaasay guri, shaqaale shan gaaraya ayaa xilligaas ka howgeli jiray, maantana in ka badan 350 shaqaale oo joogto ah ayaa ka howlgala, saddex meel ayey Jaamacaddu dhul ku leedahay, marxalado kala duwan ayayna soo martay. Ujeedka maalinta Jaamacadda SIMAD macnaheedu waxa uu yahay in sanadkasta xilligan oo kale la xuso, lagana hadlo wixii horumar ah oo ay Jaamacadda ku talaabsatay” ayuu yiri Ustaad Yuusuf Macalin.
Sidokale waxaa kalmad ka jeediyey munaasabadda Ku-simaha Guddoomiyaha Jaamacadda SIMAD, Eng. Mohamed Mohamud Mohamed waxaana hambalyo u diray dhammaan bulshada Soomaaliyeed. Sidoo kale waxa uu hambalyo khaas ah u diray shaqaalihii ugu waxqabadka fiicnaa ee sannadkan 2020.
Gabagabadii waxaa munaasabada soo afmeeray Ustaad Xasan Badawi oo ah Agaasimaha Hay’adda Direct Aid oo ah hay’addii aasaastay Jaamacadda SIMAD. Ustad Xasan ayaa Hambalyo u diray qoyska SIMAD isagoo ku amaanay Maamulka Jaamacadda qaabka wanaagsan ay u ilaaliyeen amaanadii lagu aaminay.
Previous articleAkhriso Magacyada: Ra’iisul Wasaaraha oo magacaabay Guddiga Doorashada Gobolada Waqooyi
Next articleC/raxmaan C/shakuur “Guddiyadii doorasho waxaa loo soo xulay xubno ka tirsan NISA”